Pop Pin New June 1, 2019
အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်ပြီး လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာများ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကတည်းက အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူလိုက်ရင် အရှင်းပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများဟာ အခြေအနေဆိုးရွားလာတော့မှ ဂရုစိုက်တတ်ကြတာကြောင့် မသေဆုံးသင့်ဘဲ သေဆုံးနေရကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီး ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံး ဆေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဖတ်ပြီးရင်လည်း လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါဦးနော် …. ။ …
Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာ အလန်းစား Performance တွေနဲ့ ပွဲကျအောင် ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ နေရွှေသွေးအောင် နေရွှေသွေးအောင်ကတော့ Cover Song တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ အမိုက်စား၊ အလန်းစား Cover Song တွေက ကြည့်ရှုသူတွေကို အမြင်ရသာ အသစ်အဆန်းတွေပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် မင်းသမီး …
(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ …. ။ ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်ခွဲ ကံထူးရှင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် …
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ အသိအမှတ်ပြု one heart ကော်ပရေးရှင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ပြည်ပလုပ်သားစေလွှတ်ရေး ကုမ္ပဏီငါးခုတို့ ပေါင်းစပ်ကာ ဂျပန်တွင် မြန်မာများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် မေ ၂၉ ရက်နေ့က ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်တွင် MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာလုပ်သား၅သိန်းခန့်အထိ အလုပ်ခန့်ထားရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း one heart ကော်ပရေးရှင်းတာဝန်ခံ မစ္စတာအိရှိနိကပြောသည်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီများက ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို …
အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာကို မကြောက်တော့တဲ့ (21) ရာစု အမှန်တရား ..
အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာကို မကြောက်တော့တဲ့ (21) ရာစု အမှန်တရား .. 21 ရာစု အမှန်တရား လိင်မှုကိစ္စဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာလာပြီး အချစ်စစ်ဆိုတာ ဈေးကြီးလာတယ် ။ အပျိုရည် လူပျိုရည်ပျက်မှာ ကြောက်ဖို့ထက် ဖုန်းပျောက်မှာကို ပိုပြီးကြောက်တတ်လာကြတယ် …. ။ ခေတ်မှီတယ်ဆိုတာ သောက်တတ် စားတတ်မှ ဆော်တွေ ဘဲတွေနဲ့ ပတ်ရှုပ်တတ်မှ …
စစ်တွေမှ ရန်ကုန်သို့ထွက်သည့် ခရီသည်တင်ကားတစ်စီး မိုင်းထိ စစ်တွေမှ ရန်ကုန်သို့ ထွက်ခွာသည့် ရွှေမန်းရတနာ ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးမှာ ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီကျော် အချိန်ခန့်က မြေပုံမြို့နယ် ကြာအင်းတောင်ကျေးရွာအလွန်၌ မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုတစ်ချို့ ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ခရီးသည်တင်ကားမှာ ရှေ့မှ ကားတစ်စင်းလာ၍ လမ်းဘေးချစဉ် ယင်းသို့ ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကားရှေ့မှန်နှင့် ကားအောက်ပိုင်းပျက်စီးခဲ့ပြီ ခရီးသည်များမှာ …
( ၄ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၅၅၂၈၁ ( ၄ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၀၀၀၀ င ၂၄၈၈၄၅ ( ၄ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆု သိန်း …
ဗုဒ္ဓဟူး ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ စုတ်ရော စန်းပါပွင့်ကာအိမ်ထောင်ကျကိန်း ရှိအံ့ အိမ်ထောင်ရှိက သားသမီးရတာ ထွန်းကားအံ့ ရွေရော ငွေရော ဝင်ကာ မြဲအံ့ အလှူအတန်းများ ပြုရလတ္တံ လူမှုရေးလုပ်ငန်း များရလတ္တံ ရာထူးတိုးလတ္တံ အလုပ်အကိုင်စီးပွား အစစအရာရာ အဆင်ပြေမည့် နှစ်ဖြစ်လတ္တံ ကျန်းမာရေး အထူးစိုးရိမ် ဖွယ်မရှိ ရေချိုးမှား လတ္တံ စနေ ဗုဒ္ဓဟူး သားသာမီးများနှင့် …